जो नेस्बे: लेखकका लागि स्थापना गरिएको नार्वेजियन लेखकबाट १० सुझावहरू वर्तमान साहित्य
K पत्रिकाबाट फोटोग्राफ।
नर्वेजियन लेखक जो नेस्बे, नॉर्डिक अपराध उपन्यासका मास्टर, यस अन्तर्वार्तामा दिएaसल्लाह श्रृंखला लेखकहरूको लागि। निरीक्षकको निर्माता ह्यारी प्वाल र रमाईलो पनि बच्चाहरूको किताब तपाईंको गणना ठाउँ, मार्ग र प्रेरणा जब उनी लेख्छन् र के लेख्छन्। १० सुझावहरू जुन सुरुका लेखकहरूको लागि उपयोगी हुन आउँछ। र हुन सक्छ हामी मध्ये पहिले नै केहि अभ्यास भएको छ उनीहरुसंग। हेरौं
1 १. त्यहाँ सामान्य कार्य दिनहरू छैनन्
2 २ जहाँसुकै लेख्नुहोस्
3 A. एक उत्तम योजना छ
4 A. कथाको साथ बलियो हुनुहोस्
5 Your. तपाईको जीवन प्रयोग गर्नुहोस्
6 Write. तपाईसँग जे छ, लेख्नुहोस्
7 The. शीर्षक आफैंमा प्रवाह गरौं
8 The. उत्तम रचनात्मक कार्यले काम जस्तो महसुस गर्दैन।
9 Ock। विचारहरू डक गर्नुहोस्
10 १० आफैलाई लेख्नुहोस्
१. त्यहाँ सामान्य कार्य दिनहरू छैनन्
जहाँ नेस्बे एक गणना गर्दछ काम गतिशीलता जुन प्राय: भिन्न हुन्छ तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दै। «आज म बिहान at बजे उठें। म होटलबाहिरको ठाउँमा गएँ, कफि खाएँ र until सम्म काम गरे। त्यसपछि म होटेल जिम गएँ र त्यसपछि आफ्नो एजेन्टसँग ब्रेकफास्ट गरें। म PM बजे सम्म अन्तर्वार्ता गर्नेछु, त्यसपछि म एयरपोर्ट जानेछु र फेरि ओस्लो उडान गर्नेछु। म विमानमा काम गर्नेछु, सायद hours घण्टाको लागि। लेख्नु भनेको के हुन्छ जब मसँग के गर्न को लागी कुनै चीज छैन. मसँग कुनै नियम छैनर मैले उठेको रातमा मैले जे गरे त्योमा निर्भर गर्दै म उठ्छु।
२ जहाँसुकै लेख्नुहोस्
Everywhere म जताततै लेख्छु, तर सब भन्दा राम्रा ठाउँहरू एयरपोर्ट र रेलहरू हुन्। जब तपाईं रेलमा बसिरहनु भएको छ वा विमानको लागि पर्खिनु भएको छ, तपाईंसँग मात्र लेख्न सीमित समय छ। यसले तपाइँलाई लाग्दछ कि त्यो समय अनमोल छ र तपाईंले यसको फाइदा लिनुपर्दछ। यदि तपाईं बिहान उठ्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि तपाईं १२ घण्टा लेख्न लाग्नुभयो भने, तपाईंले यो महसुस गर्नुहुन्न। मलाई थाहा छ कि म केवल १ वा २ घण्टामा जे गर्न सक्दछु।
A. एक उत्तम योजना छ
«यदि तपाइँसँग सुरु गर्नको लागि राम्रो कथा छ भने, तपाइँ जेसुकै लेख्नु भए पनि यो राम्रो हुनेछ।। मलाई यो कथा थाहा छ भनेर विश्वस्त हुन चाहन्छु, कि जब म लेख्न थाल्छु, मैले बारम्बार काम गरेको छु। त्यसो भए म पहिलो पृष्ठ पछि भावना छैन, म एक कहानीकार, एक कथाकार हुँ। कथा पहिले नै त्यहाँ छ, म यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदैछु। त्यो बेला जब तपाईले आफ्ना पाठकहरुलाई भनेको सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ, "आउनुहोस् र नजिक आउनुहोस्, किनकि मसँग यो महान कथा छ। त्यसोभए आराम गर्नुहोस् र मलाई विश्वास गर्नुहोस्। जब म महान लेखकहरूको रचनाहरू पढ्छु, यो म महसुस गर्दछु।
A. कथाको साथ बलियो हुनुहोस्
"अमेरिकीहरू आफ्ना कथाहरू प्रस्तुत गर्नमा उत्कृष्ट छन्। पुस्तकको पहिलो केहि पृष्ठहरूमा उनीहरूसँग बढाइचढाइ गर्ने धूर्त तरिका छ। यो परम्परा हो। जोन इरभि। यो गर्छ, र फ्रान्क मिलर, ग्राफिक उपन्यासकारसँग पृष्ठहरू फेर्ने तरिकामा तपाईंलाई हेरफेर गर्ने तरिका छ। मलाई त्यो मन पर्छ। र यो केहि पनि हुन सक्छ जुन तपाइँको पाठकहरूलाई पढ्न चाहान्छ। तपाईं नियमहरूको सर्तमा सोच्न सक्नुहुन्न। तपाईको हिम्मतमा त्यस्तो भावना प्रयोग गर्नुहोस्. यदि सुरूवातको विचारले तपाईंलाई मोहित गर्दछ र चुनौतीको रूपमा पनि लाग्छ भने, तपाईं सहि ट्र्याकमा हुनुहुन्छ"।
Your. तपाईको जीवन प्रयोग गर्नुहोस्
«यो वास्तविक जीवन को अनुभव मा आकर्षित गर्न राम्रो छ। जब म जस्तो किताब लेख्छु हेडहन्टर, म कालो विधा प्रयोग गर्दछु तर म आफ्नै जीवनको विषयवस्तु पनि प्रयोग गर्दछु। मैले धेरै बिभिन्न चीजहरू गरेको छु। म वायु सेनामा एक अधिकारी थिए। म संगीत बनाउँछु। मैले धेरै बर्ष स्टक ब्रोकरको रूपमा काम गरें। यो मैले प्रेरणा पाएँ हेडहन्टर। जब म वित्तीय विश्लेषक थिएँ, ती प्रतिभा शिकारीहरूले मलाई अन्तर्वार्ता दिए। के मेरा पुस्तकहरूको लागि मलाई मद्दत गर्दछ जुन मेरो जीवन हो, त्यसैले म अरूको बारेमा वर्णन गर्न सक्दछु।
Write. तपाईसँग जे छ, लेख्नुहोस्
«यो बेस्ट बेच्ने पुस्तक लेख्ने प्रयास गर्ने बारेमा होईन, तर तपाईसँग के लेख्ने भन्ने हो। र यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, तपाईं कथा अभिव्यक्तिलाई ठूलो श्रोताको साथ साझा गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई थाहा थिएन कि मेरा कथाहरू यति धेरै पाठकहरू सम्म पुग्छन्। मैले सोचे कि तिनीहरू थोरैका लागि थिए। म घरमा धेरै मान्छे भएको थाहा पाएपछि म छक्क परें।
The. शीर्षक आफैंमा प्रवाह गरौं
«कुनै नियम छैन जब यो उपन्यासको शीर्षकमा आउँछ। विचारहरू विभिन्न तरिकाहरूमा आउँछन्। संग हिममानव, उपन्यास शीर्षक संग शुरू भयो। मलाई लाग्यो कि यो शीर्षकको रूपमा ठूलो लाग्यो। र त्यसपछि मलाई यो भयो कि त्यो शीर्षकले कहानीको सर्तमा निहित कसरी बनायो। त्यो सुरुवात थियो। अन्य केसहरूमा, यो अन्तिम काम हो जुन म गर्छु र कहिलेकाँही यो मसँग आउँछ जब म पुस्तकबाट आधा बाटोमा छु। जस्तो मैले भनें, त्यहाँ कुनै नियमहरू छैनन्। हेडहन्टर यो डबल अर्थको कारण स्पष्ट थियो। यो मलाई धेरै चाँडो आयो।
The. उत्तम रचनात्मक कार्यले काम जस्तो महसुस गर्दैन।
«मेरो जागिर किताब लेख्ने कुरा के हो जुन म सित्तैंमा गर्न सक्छु। नर्वे मा, तर विश्वको बाँकी संसारमा, केहि उत्कृष्ट लेखकहरूसँग लेखन बाहेक अरु कामहरू पनि थिए। तर धेरैको लागि, काम दिनको उत्तम भाग हो जब उनीहरूले वास्तवमै के गर्न चाहन्छन् भनेर गर्छन्।
Ock। विचारहरू डक गर्नुहोस्
«यदि म अरू पुस्तकहरू चोर्छु भने के हुन्छ? निश्चित। र यदि म चोर हुँ भने, म तपाईलाई भन्न सक्छु कि म चोरी गरिरहेको छु तर म कसलाई भन्न सक्दिन। ठिक छ,aमार्क ट्वेन टम सावयर र हकलबेरी फिन। ती उत्कृष्ट पुस्तक र पात्रहरू थिए। मेरो लागी लेखन पढ्न को लागी एक प्रतिक्रिया हो। यो उही रिफ्लेक्स हो जुन तपाईंसँग साथीहरूको टेबुलमा हुँदा हुन्छ। कसैले एक कथा भन्दछ, र अर्को कसैले अर्को बताउँदछ, त्यसपछि अर्को। त्यसोभए तपाईले केहि नयाँ भन्नु पर्छ। म एउटा घरमा हुर्कें जहाँ मलाई श्रोता र पाठकको रूपमा दुबै अनुभव थिए।। अब मेरो पालो छ "।
१० आफैलाई लेख्नुहोस्
«जब म लेख्दै छु, म एकल पाठकको कल्पना गर्दै छु, मँ। मेरो लागि, लेखन भनेको मानिसहरूलाई भेट्नको लागि होईन, यो मानिसहरूलाई तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ निम्ता निम्त्याउने बारेमा हो। र यसको मतलब तपाईंले यो जान्नुपर्दछ यो कहाँ छ। जब तपाईं क्रसरोडमा आउनुहुन्छ, यदि तपाईं पाठकले तपाईंलाई कहाँ जान चाहन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, तपाईं हराउनुहुनेछ। तपाईंले आफैलाई सोध्नु पर्छ के तपाईंलाई भोलि उठेर त्यो कथा समाप्त गर्न चाहन्छ। कहिलेकाँही कथाले दिशा निर्देशन गर्दछ, तर पक्कै पनि, यो तपाईं निर्णय गर्ने लेखकको रूपमा हुनुहुन्छ। यद्यपि, अन्य पटक यो पुस्तक आफैले आफैलाई अगुवाई गर्न सक्दछ, जुन आफै एक्लै बस्दछ।
स्रोत: भ्यागुता स्याहुर
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » जो नेस्बे: लेखकहरूको लागि स्थापना गरिएको नार्वेजियन लेखकबाट १० सुझावहरू